Norway oo Kordhisay Xayiraadaha Adag ee Saaran Soogalitaanka Wadanka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaNorway oo Kordhisay Xayiraadaha Adag ee Saaran Soogalitaanka Wadanka
Norway oo Kordhisay Xayiraadaha Adag ee Saaran Soogalitaanka Wadanka
April 20, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway, Warka ugu akhriska badan 0
Sawir: Berit Roald, NTB
Dowlada Norwey waxay go aansatay inay kordhiso xayiraadaha adag ee soo gelida ilaa 13-ka May.
Tallaabooyinka ayaa la sii wadi doonaa illaa ogeysiis dheeri ah, laakiin marka ugu horreysa illaa iyo inta lagu jiro 12-ka Maajo, ayay dowladdu sheegtay Talaadadii maanta.
Waxaan wali ku jirnaa xaalad halis ah oo infekshin ah. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la kordhiyo xayiraadaha adag ee soo gelida.
“Dhammaanteen waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno inaan aragno hoos u dhac ku yimaada xaaladda cudurka, waxaana si joogto ah uga fikiraynaa inaan ka khafiifinno xaddidaadda soo gelitaanka,” ayay tiri Wasiirka Cadaaladda iyo Maareynta Degdegga ah Monica Mæland (H).
Mæland ayaa sheegtay in dib u furitaanka uu u dhici doono si tartiib tartiib ah isla markaana waafaqsan qorshaha dib u furista.
Ficil ahaan, Norway waxay xirtay xuduudaheeda Janaayo 29, laakiin marka laga reebo qaar gaar ah.
Qof kasta oo ka yimaada Norwey safarka aan loo baahnayn ee dibedda waa inuu ku sugnaadaa Hotelada karantiillada ah oo ay iska bixiyaan ugu yaraan toddoba maalmood.